၂၀၁၂ ခုနှစ် ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲ
ကော်မရှင် သမိုင်းကော်မရှင်၏ ရည်ရွယ်ချက်ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်များ
၂၀၁၇ ခုနှစ် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ၂၀၁၅ ခုနှစ်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးရေစာရင်း
လက်ရှိလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးရေစာရင်းအမျိုးသမီး လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးရေစာရင်း
၂၀၁၂ ခုနှစ် ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲ၂ဝ၁ဝပြည့်နှစ် အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ
အရည်အချင်း သတ်မှတ်ချက်အမည်စာရင်း တင်သွင်းခြင်းရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာကုန်ကျစရိတ်များ
ပြည်တွင်း မဲဆန္ဒရှင်များပြည်ပရောက် မဲဆန္ဒရှင်များကြိုတင် မဲပေးပိုင်ခွင့် ရှိသူများ ( ပြည်တွင်း)
အများယုံကြည်လက်ခံသည့် ရွေးကောက်ပွဲမှသည် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံသို့	Filter
စုံညီခုံရုံးက အယူခံမှုအမှတ် ( ၁/၂၀၁၇) အား အပြီးသတ်အမိန့်ချမှတ်ခြင်းနှင့် အမှုများအားလုံးစစ်ဆေးပြီးစီးခြင်း
နေပြည်တော် ဧပြီ ၁၁ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၂)မှ အမျိုးသား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းခံထားရသူ ဦးပြူးလွင် (အမျိုး သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ)အပေါ် ဦးလှဆွေ (ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ) က လျှောက်ထားသည့် ရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာအမှုအမှတ် (၁၇/၂၀၁၅) ကို ရွေးကောက်ပွဲ ခုံအဖွဲ့(၄)၏၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၄ ရက်တွင်ချမှတ်ခဲ့သည့် စီရင်ချက် (အမိန့်) အား ဦးလှဆွေမှ ကျေနပ်မှုမရှိသဖြင့် အယူခံမှုတင်သွင်းလာရာ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်သည် အယူခံမှုအမှတ် (၁/၂၀၁၇) ဖြင့် လက်ခံခဲ့သည်။ ယင်းအယူခံမှုအား ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဧပြီ ၁၁ ရက်တွင် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှသိန်းကဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ်ဆောင်ရွက်ပြီး၊ အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် ဦးအောင်မြင့်၊ ဦးစိုးရယ်၊ ဦးထွန်းခင်၊ ဦးလှတင့် တို့ပါဝင်သည့် စုံညီခုံရုံးမှ မူလရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့(၄)၏ ၂၄-၂-၂၀၁၇ရက်နေ့က ချမှတ်ခဲ့သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်အမိန့်ကို ဆက်လက်အတည်ပြုပြီး အယူခံလျှောက်ထားသူ၏အယူခံမှုကို စရိတ်နှင့်တကွပယ်ကြောင်း အမိန့်ချမှတ်ခဲ့သည့်အပြင် တရားစရိတ်ငွေကျပ်တစ်သိန်းကို အယူခံလျှောက်ထားသူ ဦးလှဆွေမှ အယူခံလျှောက်ထားခံရသူ ဦးပြူးလွင်အား ပေးစေသည့် အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အနေနှင့် ၂၁-၁၂-၂၀၁၅ ရက်နေ့မှစ၍ ရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာအမှုများ၊ပြင်ဆင်မှုများ နှင့်အယူခံမှုများကို ရွေးကောက်ပွဲ ခုံအဖွဲ့များ၊ စုံညီခုံရုံးများဖြင့် ကြားနာစစ်ဆေးခဲ့ရာ ၂၀၁၇ခုနှစ် ဧပြီ ၁၁ရက် တွင် အမှုများအားလုံးစစ်ဆေးပြီးဖြစ်သည်။	(၂၉-၄-၂၀၁၆) ရက်နေ့ ရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာအမှုများ စစ်ဆေးခြင်း
နေပြည်တော်၊ ဧပြီ ၂၉
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အနေဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာအမှုများအား ဆက်လက်စစ်ဆေးလျှက်ရှိရာ ယနေ့နံနက် ၁၀ နာရီတွင် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံး၊ ရွေးကောက်ပွဲခုံရုံးတရားခွင်များ၌ ရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့ (၁) ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်မြင့်၊ အဖွဲ့ဝင် ဦးစန်းရွှေ နှင့် ဦးဝင်းမော်တို့က ရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာအမှုအမှတ် (၁/၂၀၁၅)၊ (၄/၂၀၁၅)၊ (၇/၂၀၁၅)နှင့် (၁၇/၂၀၁၅) တို့အားလည်းကောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့ (၂) ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိုးရယ်၊ အဖွဲ့ဝင် ဦးသောင်းလှိုင် နှင့် ဦးဇော်လင်းမောင်တို့က ရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာအမှု အမှတ် (၃/၂၀၁၅)၊ (၅/၂၀၁၅)၊ (၁၉/၂၀၁၅)၊ (၂၀/၂၀၁၅)၊ (၂၁/၂၀၁၅)၊ (၂၉/၂၀၁၅)၊ နှင့် (၃၈/၂၀၁၅) တို့အားလည်းကောင်း ဆက်လက်စစ်ဆေးခဲ့ပြီး အမှုရုံးချိန်း ပြန်လည်ချိန်းဆိုခဲ့သည်။	၃-၆-၂၀၁၆ ရက်နေ့ ရွေးကောက်ပွဲ ကန့်ကွက်လွှာ အမှုများ စစ်ဆေးခြင်း
နေပြည်တော်၊ ဇွန် ၃
ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အနေဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲ ကန့်ကွက်လွှာ အမှုများအား ဆက်လက် စစ်ဆေးလျက် ရှိရာ ယနေ့နံနက် ၁၀ နာရီတွင် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ရုံး၊ ရွေးကောက်ပွဲခုံရုံး တရားခွင်များ၌ ရွေးကောက်ပွဲ ခုံအဖွဲ့(၂) ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိုးရယ်၊ အဖွဲ့ဝင် ဦးသောင်းလှိုင်နှင့် ဦးဇော်လင်းမောင် တို့က ရွေးကောက်ပွဲ ကန့်ကွက်လွှာ အမှုအမှတ် (၅/၂၀၁၅)၊ (၁၉/ ၂၀၁၅)၊ (၂၀/ ၂၀၁၅) နှင့် (၃၄/၂၀၁၅) တို့အား လည်းကောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲ ခုံအဖွဲ့ (၃) ဥက္ကဋ္ဌ ဦးထွန်းခင်၊ အဖွဲ့ဝင် ဦးတင်မြင့်နှင့် ဦးမောင်မောင်လေးမြင့် တို့က ရွေးကောက်ပွဲ ကန့်ကွက်လွှာ အမှုအမှတ် (၁၄/၂၀၁၅) နှင့် (၁၆/၂၀၁၅) တို့အား လည်းကောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲ ခုံအဖွဲ့(၄) ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှတင့်၊ အဖွဲ့ဝင် ဦးခင်မောင်ဝင်းနှင့် ဦးကျော်သူ တို့က ရွေးကောက်ပွဲ ကန့်ကွက်လွှာ အမှုအမှတ် (၁၀/၂၀၁၅) နှင့် (၁၁/၂၀၁၅) တို့အား လည်းကောင်း ဆက်လက် စစ်ဆေး ဆောင်ရွက် ခဲ့သည်။
ရှေ့ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ရမည့် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တွေ့ဆုံမှာကြား
နေပြည်တော် ဧပြီ ၄
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှသိန်းနှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် ယနေ့မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံး၊ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ရုံးမှ ဝန်ထမ်းများနှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲများမှ ရွေးကောက်ပွဲအရာရှိများအား တွေ့ဆုံ၍ ရှေ့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရမည့် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် စပ်လျဉ်းပြီး ရှင်းလင်းမှာကြားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ဖွဲ့စည်း တာဝန် ပေးအပ်ခြင်းလက်ရှိပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၂ဝ၁ဝ ပြည့်နှစ် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ဖွဲ့စည်းပုံလက်ရှိ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ဖွဲ့စည်းပုံ၂ဝ၁ဝ ပြည့်နှစ် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ဖွဲ့စည်းပုံပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ရုံးဖွဲ့စည်းပုံ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများကျင့်ဝတ်များ
အမိန့်နှင့်ညွှန်ကြားချက်များ၂၀၁၂ ခုနှစ်၂၀၁၁ ခုနှစ်၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် မဲဆန္ဒနယ်သတ်မှတ်ခြင်းမဲစာရင်းပြုစုခြင်း နိုင်ငံရေး ပါတီများ မှတ်ပုံ တင်ခြင်းမဲဆွယ်စည်းရုံးခြင်းသင်တန်းပို့ချခြင်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုနည်းဥပဒေပါ ပုံစံများ ရွေးကောက်ပွဲခုံရုံးဆိုင်ရာ
ကန့်ကွက်လွှာအမှုတင်သွင်းခြင်းကန့်ကွက်လွှာအမှုများ၂၀၁၅ ခုနှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ကန့်ကွက်လွှာအမှုများ၂၀၁၂ ခုနစ် ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲ ကန့်ကွက်လွှာ အမှုများ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် ကန့်ကွက်လွှာ အမှုများပြစ်မှုများနှင့် ပြစ်ဒဏ်များတရားမဲ့ပြုကျင့်မှုများရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာ ဆုံးဖြတ်ချက်များ
July, 2017	June, 2017	May, 2017	April, 2017	March, 2017	January, 2017	December, 2016	November, 2016	October, 2016	September, 2016	You are here: Home ရွေးကောက်ပွဲများ ၂၀၁၂ ခုနှစ် ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲ
Web Developer: Myanmars.NET, Yangon, Myanmar. © Copyright 2013 by Election Commission in Myanmar.
ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံး၊ နေပြည်တော်။